Madax Waynaha PSG Ee Nasser Al-Khelaifi Oo Qalbi Jabiyay Real Madrid Isaga Oo Si Adag Uga Hadlay Xaalada Neymar Jr Iyo Weerar Uu Ku Qaaday Saxaafada Spain & France. – GOOL24.NET
Madax Waynaha PSG Ee Nasser Al-Khelaifi Oo Qalbi Jabiyay Real Madrid Isaga Oo Si Adag Uga Hadlay Xaalada Neymar Jr Iyo Weerar Uu Ku Qaaday Saxaafada Spain & France.
May 13, 2018 Mahamoud Batalaale
Madax waynaha kooxda Paris Saint-Germain ee Nasser Al-Khelaifi ayaa si adag isla markaana ay cadho wayni ku jirto uga hadlay wararka xanta suuqa kala iibsiga ee la xidhiidha xidiga kooxdiisa ee Neymar Jr wuxuuna soo xidhay albaabka Real Madrid ay ku doonaysay in ay u soo marto saxiixa xidiga ree Brazil.
Dhinaca kale madax waynaha PSG ee Nasser Al-Khelaifi ayaa eedayn u soo jeediyay saxaafada dalalka Spain iyo France laakiin isaga oo duur xul u samaynaya qaabka ay labada saxaafadood ugu kala duwan yihiin in ay u hiiliyaan kooxaha wadamadooda ka dhisan.
Nasser Al-Khelaifi ayaa saxaafada Spain ku duray in ay u adeegayaan kooxaha dalkooda Spain isla markaana ay olole ugu jiraan in ay Neymar Jr hesho Real Madrid laakiin waxa uu su’aal ka keenay haddii saxaafada dalka France ay difaacayso kooxaha dalkooda iyo in ay iyaduna u shaqaynayso kooxaha ree Spain.
Nasser Al-Khelaifi ayaa boqolkiiba 2000% hubaal ka dhigay in Neymar Jr uu kooxdiisa ku sii nagaan doono oo aanu meel uga socon wuxuuna sidii looga bartay sheegay in xidiga ree Brazil uu heshiis kooxdiisa kula jiro. Nasser Al-Khelaifi ayaa ah nin aan u joojin xataa haddii ay ciyaartoyda kooxdiisu doonayaan in ay baxaan sidii horeba xidigo badan ugu sameeyay.
Nasser Al-Khelaifi oo si adag uga jawaabaya wararka Neymar Jr ee sheegayay in uu ka baxayo kooxdiisa PSG ayaa yidhi: ” Ayaa sheegay in aanu isagu (Neymar) halkan sii joogi doonin? Miyuu jira qof sidaa sheegay?. Isagu heshiis ayuu nagula jiraa anaga, waan hubaa in Neymar uu xili ciyaareedka soo socda sii joogi doono PSG boqolkiiba 2000%”.
Nasser Al-Khelaifi oo duur xul isku jira iyo cadho u muujinaya saxaafada dalalka Spain iyo France ee buun buuninta arinta Neymar ayaa yidhi: “Saxaafada Spain waxay wali u shaqaynaysaa kooxaha Spanishka ah iyo wax ka soo horjeeda kooxaha Faransiiska. Saxaafada Faransiisku ma garanayaan cida ay u shaqaynayaan, kooxaha Spanishka ah mise kooxaha ree France?”.
Hadalka madax waynaha PSG ee Nasser Al-Khelaifi ayaa biyo qabow ku shubaya warar ay saxaafada Spain gaar ahaan Madrid xoog u buun buunisay oo sheegayay in Neymar Jr uu ka baxayo Paris iyada oo xataa la gaadhsiiyay in aanu Paris ku laaban doonin marka uu koobka aduunku soo dhamaado.
Hadalka madax waynaha PSG ee Nasser Al-Khelaifi iyo waxaa si toos ah isku waafaqay hadal uu jimcihii sheegay khabiirka kubbada cagta Spain iyo Sky Sports ee Guillem Balague kaas oo sheegay in saxaafada Madrid ay tahay tan buun buunisay arinta Neymar wuxuuna markaas ku dooday in PSG ayna diyaar u ahayn in ay iibiso Neymar.
Neymar Jr oo muddo saddex bilood ah garoomada dhaawac kaga maqnaa ayaa PSG xili ciyaaredkan u soo dhaliyay 19 gool oo horyaalka France ah kadib markii uu 20 kulan saftay.